Eye Care – Page3– Healthy Life Journal
မျက်ကပ်မှန်တပ်သူအတွက် သီးသန့်မျက်စဉ်းဆေး ခတ်သင့်သလား
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မျက်ကပ်မှန်တပ်နေသူတွေအနေနဲ့ မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတွေ သုံးရတဲ့ သီးသန့်မျက်စဉ်းဆေးခတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ NN (FB) A. ရပါတယ်။ ဒီဆေးရည်က မျက်ကပ်မှန်တပ်သူတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတာပါပဲ။ တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ မျက်ရည်တု...
အခြားရောဂါရှိသူအား မျက်စဉ်းဆေးနှင့် မျက်စိကုသဆေးပေးလျှင်
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စဉ်းဆေးနဲ့ မျက်စိကုသဆေးတွေ ပေးရာမှာ တခြားဆေးကုသမှု ခံယူနေရရင် ဘာကိုသတိထား သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်စဉ်းဆေးနဲ့ မျက်စိကုသဆေးတွေ ပေးရာမှာ တခြားဆေးကုသမှု...
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကွန်ပျူတာရှေ့ အထိုင်များ၊ ကွန်ပျုတာအကြည့်များတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ Hlanwe(FB) A. မျက်စိက တစ်နေရာတည်းမှာ ကြာကြာကြည့်ပြီး အာရုံစိုက်ထားရင် မျက်စိရဲ့သူငယ်အိမ်ကို ထိန်းထားတဲ့...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိခြောက်သွေ့ခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ A. မျက်စိခြောက်သွေ့တယ်ဆိုတာ မျက်စိက မျက်ရည်မထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ခေါ်တာပါ။ မျက်စိမှာရှိတဲ့ အချွဲ(mucin) ထွက်တဲ့ Conjunctival...
မျက်စိနာခြင်း(မျက်မြှေးရောင်ရမ်းနာ)နှင့် ပတ်သက်သည့် အယူအဆများ
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မျက်စိနာနေတဲ့သူကို ကြည့်လိုက်မိရင် မျက်စိနာတာ ကူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆအကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ A. မျက်စိနာတဲ့သူကို ကြည့်မိရုံနဲ့ မကူးနိုင်ပါဘူး။ ပိုးကူးစက်တယ်ဆိုတာက ထိတွေ့မှုရှိမှပဲ...
မြင်းခွာရွက်မှာ သံဓာတ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်အေနဲ့ ဗီတာမင်စီတို့ ပါဝင်ပြီး သတ္တုဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ (၁) မြင်းခွာရွက်စားပေးတာက အမြင်အာရုံကောင်းစေပြီး မျက်စိကျိန်းစပ်တာ၊ မျက်စိနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ပြဿနာတွေကနေ အမြန်ဆုံး သက်သာစေပါတယ်။ (၂) သွေးတွင်းဟေမိုဂလိုဘင်အဆင့် မြင့်တက်စေပြီး သွေးအားနည်းတာကို သက်သာစေပါတယ်။ (၃)...
————–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊————- Q. မျိုးရိုးလိုက်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိရောဂါတွေအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ မျက်စိရောဂါတွေကို အစဉ်လိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်- (၁) မျက်ခွံ(Eyelid)မှာတော့ မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ ရောဂါမရှိပါဘူး။ (၂)...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. မျက်စိမညောင်းအောင် ဖုန်းသုံးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာသုံးခြင်း၊ တီဗီကြည့်ခြင်း စတဲ့ မျက်စိအသုံးပြုရတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်တွေ ရှိပါသလား။ ရှိရင် ပြောပြပေးပါဆရာ။ A. မျက်စိမညောင်းအောင် မျက်စိသုံးပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေကို ရှောင်လို့မရတော့ ဆင်ခြင်စရာတွေတော့ ရှိပါတယ်။...